ပူရှိန်းသကြားလုံးတောင်နာမည်ကြီးပြီး စျေးတက်သွားတယ်လို့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ ထိန်းသိမ်းခံထားရမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဆိုဖီယာ – SKP Entertainment
ပူရှိန်းသကြားလုံးတောင်နာမည်ကြီးပြီး စျေးတက်သွားတယ်လို့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ ထိန်းသိမ်းခံထားရမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဆိုဖီယာ
အလွမ်းအဆွေးသီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ နေရာရခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (က/၂၁) နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ခုလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ အပေါ် အနုပညာရှင်တော်တော်များကလည်း ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အနေအေးပုံ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းပုံတွေကြောင့် ခုလို မူးယစ်ဆေးသုံးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုနေကြပြီး ဖြိုးပြည့်စုံဘက်ကနေ အားပေးစကားတွေ ပြောကြားလာခဲ့ကြပါတယ်…. ဒီလိုပြောကြသူတွေထဲမှာ လည်း အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆိုဖီယာကလည်း ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်…
ဆိုဖီယာရဲ့ ပြောစကားအရ ဖြိုးပြည့်စုံဟာ အရက်သေစာတောင် မသောက်စားတတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်…. ဝါတွင်းကာလလုံးဝ အရက်ရှောင်ပြီး အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း ခြေလေးချောင်းသားတောင်မစားဘူး အသားဆို ငါးပဲ စားတယ်လို့ သိရပါတယ်…. ဖြိုးပြည့်စုံဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်စရိုက်အရမ်းကောင်းပြီး ခုလို ဆေးသုံးတာတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်….. ဒါ့အပြင် ခုလိုမိတဲ့ ဆေးပြားတွေဆိုတာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက Play More ဆိုတဲ့ သကြားလုံးသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့အပေါ်မှာလည်း ဆိုဖီယာက ပြောကြားခဲ့ရာမှာတော့ သကြားလုံးBrand နာမည်တက်သွားပြီး ခုဈေးတောင်ကြီးသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဆိုပြီး ပြောကြားသွားပါတယ်….
ဒါ့အပြင် ကံအရ အမှုအခင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွဲလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုဖီယာက ဆိုပါတယ်….. ခုလို ဖြိုးပြည့်စုံ ဖမ်းခံထားရတဲ့ အပေါ်မှာလည်း စိတ်ပူမိကြောင်းနဲ့ အဲလိုနေရာတွေက ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးလို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်…. ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ အောက်က ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်….
Video Source : မိုမိုလေး – Momolay.com
Previous post ဗီရာနဲ့ပွဲအတွက် ခေါင်းထဲမထားပဲ ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ တိုကျိုမြို့လယ်မှာ လျှောက်လည်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
Next post ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံတယ် အမှန်တရားပေါ်လာမှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ